Zọ isii ị nwere ike inyocha arụmọrụ SEO gị ma jiri ozi ahụ ka ịnye ọkwa dị elu na Google
Site na nsonaazụ mbụ ise a na-arụ ọrụ na-enye iwu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 70 nke Google Pịa. Ọ dị mkpa ịnweta nghọta zuru oke gbasara nchịkọta SEO. Ọ bụ ezie na iji Semalt rụọ ọrụ ga-enyere gị aka iru ebe ahụ, ọ dị mkpa ịmata ihe ị na-ele anya na otu esi abara gị uru.
N'okpuru, anyị ga - agafe ihe isii ị nwere ike iji nweta nghọta gị banyere SEO. Site n’ịghọta isiokwu ahụ, ịnwere ike ịkwado ebe nrụọrụ weebụ gị ruo n’ókè ebe nchọta ya ga-enyere onwe ya aka. Ọ bụghị ndepụta niile jikọtara ọnụ, mana ọ ga-eme ka ị nweta nghọta zuru ezu banyere otu ị ga-esi bido.
Lelee isi okwu gị.
Gbanwee nkọwa meta gị.
Leba anya na ihe ndi osompi gi.
Lelee Keywords ị na-eji.
Jiri onye na-ahụ maka weebụsaịtị wepụrụ Semalt.
Tinye ego na Mgbasa Ozi SEO.
Lelee isi okwu gị
Kemgbe oge mmalite nke mmepụta ọdịnaya, isi okwu akwalitela ọkwa dị elu mgbe niile. Iji utu aha H2 na H3 gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-eweta usoro a pụrụ ịgụta agwuru. Wụsa ha n’ebe kwesịrị ekwesị iji hụ na a ga-agụ ya. Usoro a ga - agba ndị na - agụ akwụkwọ ume ka ha nọrọ, na-eme ka ogo nke weebụsaịtị dị elu na ngwa ọchụchọ.
Usoro a naanị agaghị enwe mmetụta dị ukwuu na SEO gị. Ma mgbe ijikọ nke a na isiokwu kwesịrị ekwesị, ndị na-agụ ya ga-enwe ike ịchọta gị ma rapara n'akụkụ. O yikarịrị ka ị ga - elele weebụsaịtị ma ọ bụrụ na ọ dị mfe ọgụgụ.
Mgbe ị na-emegharị ndị isi gị, gbalịa icheta post blog gị dịka akwụkwọ. H1 kwesịrị ịbụ aha gị, ọ kwesịrị ịgwa ndị na-agụ ihe ha chọrọ. N'okpuru isiokwu nta, enwere m aro abụọ.
Nhọrọ mbu bu itinye isi okwu gi dika ihe nkwenye bara uru nke gbaburu na njedebe nke isi okwu gi. Nhọrọ nke abuo bu inye okwu mmeghe nke so n’uzo ntughari nke nwere nkọwa zuru oke banyere isi okwu a. Nhọrọ nke abuo na - eme ka onye na - aguta ya puta ihe, ma nchoputa mbu rue na isi okwu. Enweghị otu ụzọ dị mma isi mee nke a, yabụ gbaa egwu ruo mgbe ịchọta ihe na-arụ ọrụ.
Gbanwee nkọwa Meta Gị
Otu akụkụ kacha enyere gị aka na ebe nrụọrụ weebụ gị bụ nkọwa nke meta. Ọtụtụ ndị amaghị na nkọwa meta dị na ibe ọ bụla. Site n'inwe nke a, ị nwere ohere dị elu nke ibe peeji ma ọ bụ ogo ederede.
Peeji a ga - eduga ndị mmadụ n'akụkụ ndị ọzọ nke weebụsaịtị gị, ebe ha nwere ike ijikwa ọrụ gị. Na google, nkọwa meta dị n'okpuru peeji ọchụchọ njikọ okwu. Lee n'okpuru maka ọmụmaatụ ihe atụ.
Site n'echiche SEO, itinye mkpụrụokwu kwesịrị ekwesị na nkọwa meta bụ ụzọ dị mma iji bulie n'igwe ọchụchọ. Ọ bụrụgodị na okwu ndị dị na nkọwa a enyereghị gị aka SEO, ọ ga-eme ka onye na-agụ ya mata ihe ha ga-atụ anya tupu ịpị. Enweghị ịkọwa nkọwa meta bụ ohere efu.
Mgbe ị na-eke nkọwa nkọwa meta gị, gbalịanụ ime ka ihe dị mkpụmkpụ ma kwụ ọtọ. Kpọọ oku ka ị rụọ ọrụ (CTA) ịgwa ndị mmadụ ihe ha ga-eme n’ime nkọwa a. Thezọ a na-ahụkarị bụ idobe ya karịa mkpụrụ edemede 150.
Leba anya na Asọmpi Ndi Asaa Gi
Tulee isi okwu, ihe di n’ime ya, na otu mgbe ichoro ihe ha di. Echiche abụghị izu ụdị ha. Ebumnuche gị kwesịrị ịdị na-akawanye mma maka ọdịnaya ha.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ahịa na-ekepụta ọdịnaya maka obere ụlọ ọrụ akpụkpọ ụkwụ, ị ga-achọ ịhụ ihe ndị mmadụ nọ n'ọnọdụ gị na-eme. Ga - achọ ịmepụta ọdịnaya nke na - amasị ndị na - ege gị ntị. Dịka ọmụmaatụ, Zappos na-elekwasị anya na ndị na-eto eto na-eto eto na-ekwusi okwu ike na ụdị.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ akpụkpọ ụkwụ gị chọrọ ịsọ mpi, ihe mgbaru ọsọ ga-abụ ịbịakwute ụlọ ọrụ dị ka Zappos. Agbanyeghị, mgbe ị bụ onye mbido, ị ga-achọrịrị ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eme otu ihe ị na-eme ma mepụta ọdịnaya nke na-eme ka ihe dịwanye elu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na akpụkpọ ụkwụ dị iche dị iche na-alọghachi n'ụdị ejiji, ị ga-achọ idowe akara okwu "akpụkpọ ụkwụ dị iche".
Ga-ede ọtụtụ isiokwu na-ekwu gbasara isiokwu nke gụnyere ntuziaka maka otu esi ehicha ha nke ọma, uwe ogologo ọkpa ndị ha na ha ga-eyi, uwe elu ha na-aga, na otu esi eme ka ha dịruo mgbe ebighi ebi. Ọ bụrụ na unu abụọ emee ndepụta idekọ, ọrụ gị ga - abụ ịme isi okwu na ọdịnaya na-emetụta nke ha. Y’oburu na inyocha onu ha, ihe ato ha kwesiri ime ka ato gi.
Lelee Keywords are na-eji
Isiokwu a bụ ihe gbasara ndọtị nke post anyị gara aga, mana isiokwu na-ezighi ezi n’isi gị na ọdịnaya nwere ike ịdọrọ ndị na-ezighi ezi. Iji ihe atụ mbụ, ọ bụrụ na ị na-emepụta blọọgụ na-elekwasị anya akpụkpọ ụkwụ, ị chọghị onye na-achọ uwe elu. Na-agbanwe agbanwe maka isiokwu "polyester dị nro" agaghị enyere ụlọ ọrụ akpụkpọ ụkwụ gị aka nke ukwuu.
Ọzọkwa, isi okwu ị na-eji nwere ike ịsọ mpi. Maka obere ụlọ ọrụ, ọ nwere ike ịdị mkpa iji hazie obere okwu emetụtaghị. Ọ baghị uru ịnwale na ọkwa maka "akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ" mgbe ụlọ ọrụ 300,000 ọzọ chọrọ ime otu ihe ahụ. Ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ dị n'okpuru ebe a bụ ndị ama ama, ntụkwasị obi.
Omume ọjọọ m na-ahụ ụbọchị ndị a bụ "isiokwu nri." Nri isiokwu na-anwa ịzọlata ọtụtụ okwu a na-achọgharị na blọọgụ iji mee ya ọkwa nke injin Google. Nsogbu nke usoro a bụ na Google's AI ghọtara okwu a. Ndị na-anwa ịkọ isiokwu agaghị amacha ọkwa.
Iji nweta ezigbo echiche izugbe banyere otu isi ọrụ si arụ ọrụ, ịnwere ike iji google. Site na ịchọ okwu ị chere ga-eme ka ndị mmadụ webata mkpokọta weebụ gị, ị ga - ahụ ihe websaịtị ọzọ na - ekwu maka okwu ahụ. Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ ndị ahụ dị na niche gị, mgbe ahụ ị nwere isi okwu ziri ezi. Site na itinye ihe n’okwu ahụ, ị nwere ike wedata isiokwu ahụ.
Jiri nchịkọta weebụsaịtị weebụsaịtị Semalt
Weebụsaịtị, n’elu mmepe mbụ, n’ezie nwere ọtụtụ okwu dị iche iche. Ha nwere ike nwee njikọ jikọtara, ọtụtụ redirections, njikarịcha na-adịghị mma, ma na-egbu oge ibu. Onye nchịkọta weebụsaịtị Webụ Semalt na-achọ ịchọpụta nsogbu ndị a.
Ngwunye Ntanetị Weebụsaịtị na-enye gị ngwaọrụ achọrọ iji kpokọta ọtụtụ nchegbu anyị lebara anya na mbụ, mana niile na otu ngwugwu. Maka njirimara a, ịkwesighi ịkwụ ụgwọ iji nweta echiche ebe ebe nrụọrụ weebụ gị dị. Agbanyeghị, ndị na-abụghị ndị ọkachamara kwesịrị ịtụle mkpọsa SEO.
Site na iji nyocha dị mma, ị ga - enwe ike ịghọta ihe ihe nrịba anya na ebe nrụọrụ weebụ gị na - ebute ntụgharị na ihe Keywords na - abawanye okporo ụzọ na saịtị gị. Ọ bụ ezie na ha bara uru maka ebumnuche dịgasị iche, ọ bụrụ na ebumnuche mkpọsa SEO gị bụ iwelie ahịa, ị chọghị isi okwu na-adọta ndị ọbịa. Echiche a na-ewetara anyị isiokwu anyị na-esote, họrọ itinye ego na mkpọsa ga-enyere gị aka itolite.
Tinye ego na Mgbasa Ozi SEO
E nwere ọtụtụ akụ dị iche iche dị napụta nke ga - enyere gị aka mụta usoro SEO . Ma awa a na-apụghị ịgụta ọnụ ọ ga-ewe iji nyochaa isiokwu ahụ nwere ike na-agwụ ike. Ọ bụ eziokwu kacha ma ọ bụrụ na ịnwere obere azụmaahịa nke kwesiri ịchọrọ ihu ahịa. Cannotgaghị elekwasị anya na ịre ahịa ma ọ bụrụ na ị na-etinye oge ahụ na-eme nchọpụta maka otu weebụsaịtị gị nwere ike isi nọrọ n'usoro.
Site na ijikọta ihe omuma gi banyere isi ya na ndi okachamara Semalt, ị gha enwe ike ihu uzo nke gha n’iru n’ihu. Ọzọkwa, ihe omuma a nwere ike inyere gi aka inwe otu uru enyere site na Semalt. Ọrụ anyị na-abịa ịgba mbọ hụ na mkpụrụokwu ndị ị họọrọ na-ebute sistemụ arụmọrụ. N’ezie, mkpọsa anyị na-abịa na isiokwu ndị atụ aro.
You nwere ike ịhọrọ n'etiti ọtụtụ mkpọsa dabere na ogo weebụsaịtị gị na mmefu ego gị. Gbalia nyochaa nkọwa nke AutoSEO na FullSEO iji hụ na anyị na-egbo mkpa gị. N'inye ogo na onu ogugu enwere ugbua nke weebụsaịtị gi, ndi okachamara Semalt tozuru oke iji nyere gi aka ime mkpebi ego kacha mma.
Etu ịghọta etu esi enyocha SEO nwere ike inyere gị aka iru Google Top
Site n'inwe nghọta zuru oke banyere nyocha SEO, ị ga - enwe ike inye onwe gị aka iji bulie elu na google. N'ezie, ọdịnaya bara uru ma na-agụ ihe dị ezigbo mkpa na nke a. Isi okwu dabara adaba na isi okwu dị mkpa abụghị naanị na-enyere SEO gị aka mana jide n'aka na onye na-agụ nwere ike iso.
Ọzọkwa, ịghọta ojiji nke nkọwa meta ga - enyere gị aka iwebata ndị nwere ike ịhapụ webụsaịtị gị na mkpesa. Site na ịnye CTA na nkọwa meta, ha ga-amata ihe ha ga-atụ anya ya na ederede gị. Ndị na-agụ akwụkwọ bụ ndị mmụọ obi ike zuru ezu n'okwu ha.
Isi okwu dicha ka mkpa ka aguta n’abia na SEO. Site na iji ngwa nyocha Semalt n'efu, ị nwere ike nweta ezigbo echiche ebe ị ga-amalite. Site na ịgbasa nke a iji tinye mkpọsa SEO, ị nwere ike ịgbanwe nghọta a ka ọ bụrụ nsonaazụ na-enweghị atụ. Maka ozi ndị ọzọ gbasara ngwaọrụ ndị a, mepụta akaụntụ taa.